Indawo yokuxhasa i-Waist - abavelisi beenkxaso zeliya laseTshayina, abaThengisi
Ukuncipha kwesinqe esinqeni
Isithambisi esinqeni sikhaphukhaphu, sithambile, sithambile kwaye sinomoya. Ingakunceda uyilobe ijika efanelekileyo. Ukuzivocavoca imizuzu elishumi kwesi sinxili esinqeni sakho kuya kukwenza ukuba ubila. Ibhanti ehlengahlengisiweyo ephindwe kabini inokuqinisekisa ukuba uxinzelelo olulungileyo kunye nokuphefumla. Umzimba wakho ulunge kakhulu kwaye ubonakalisa ukumila komzimba wakho. Ubungakanani obuhlukeneyo kunye nemibala iyafumaneka, i-OEM nayo yamkelwe.
Uyilo lwethu olukhethekileyo, ukuloba kwe-sliver ion, esetyenziselwa ukuqokelela ubushushu xa unxibe, kodwa isaphefumla kwaye ikhululekile, kwaye ikubonelela ngokucinezelwa okungcono kunye nokubila ngakumbi xa kuthelekiswa neentlobo eziqhelekileyo zebhanti le-sweat, ukuze iwubumbe umzimba wakho ngexesha elifutshane . Izixhobo zilula kwaye zikhululekile, aziyi kuba luxanduva xa uzilolonga.